मध्य अगष्टबाट कोरियामा १८ देखि ४९ बर्षका करिब १ करोड ७० लाखले खोप पाउने – Eps Sathi
August 1, 2021 771
दक्षिण कोरियामा १८ देखि ४९ बर्ष उमेर समूहका मानिसले अब खोप पाउने भएका छन। आउँदो अगष्ट महिनामा कोरियामा रहेका १८ देखि ४९ बर्षका मानिसहरुले खोप पाउने भएका हुन। नोभेम्बर महिनासम्ममा सबैजसोलाई खोप लगाइसक्ने दक्षिण कोरियाको म’हत्वाकाँक्षी लक्ष भेट्टाउन कोरिया अहिले प्रयासरत रहेको छ।
कोरिया रो’ग नि’यन्त्र’ण तथा रो’कथा’म ए’जेन्सीले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार कोरियाले अगष्ट र सेप्टेम्बर महिनामा यहाँ रहेका १८ देखि ४९ बर्ष उमेरका करिब १ करोड ७८ लाख मानिसहरुलाई खोप लगाउनेछ। कोरियाले सेप्टेम्बर महिनासम्ममा करिब ३ करोड ६० लाख मानिसलाई कम्तिमा एक डो’ज खो’प लगाइसक्ने बताएको छ।
कोरियामा जसको काम नियमित जसो बा’ल ब’च्चाहरुको सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ उनिहरु तथा सार्व’जनिक यातायातका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु, सामान ओ’सार प’सारमा काम गर्ने व्यक्तिहरु स’रसफाईका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु यस खो’प अ’भियानको पहिलो प्रा’थमिकतामा पर्नेछन। उनिहरुले अगष्ट १७ भन्दा अगाडी खोप पाउने गरि कार्यक्रम तय गरिएको छ। बाँकी रहेका मानिसहरुको खो’प कार्यक्रम अगष्ट २६ बाट सुरु गरिनेछ।
मानिसहरुलाई उनिहरुको जन्मदिनका आधारमा खो’प लगानउने दिन तय गरिएको छ। खोप लगाउन भि’डभा’ड नहोस भन्ने उदेश्यले यस्तो गरिएको हो। सरकारले अगष्ट ९ देखि १८ सम्म खो’प रि’जर्भ गर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। यस अन्तरगत जसको जन्ममितीको अन्तिम अङ्क ९ छ उनिहरुले अगष्ट ९ मा खोप लगाउन पाउनेछन। त्यसैगरी अङ्क ८ हुनेले अगष्ट १८ मा खो’प पाउनेछन।
खोप रिज’र्भेसन सि’ष्टम राति ८ बजेदेखि अर्को दिन साँझ ६ बजेसम्म खुला हुनेछ। यदि यस समयमा खो’प रि’जर्भ गर्न छु’टेमा वा रिजर्भ गरि खो’प लिन नगएमा उनिहरुले अगष्ट १९ देखि सेप्टैम्बर १७ मा फेरि खो’प लगाउन पाउनेछन। कोरियामा १८ बर्षदेखि ४९ बर्षसम्मका मानिसहरुले कित फाइजर कम्पनीको कित मोडर्ना कम्पनीको खो’प लगाउनेछन। उनिहरुलाई कुन दिन तथा कुन खोप केन्द्रबाट खोप लगाउने भन्ने कुरामा छ’नौट गर्ने सुविधा दिइएको छ। यस अ’भियानमा सम्पूर्ण बिदेशी तथा अ’बैधा’निक रुपमा कोरियामा बसोबास गरिरहेकाहरुले समेत खो’प लगाउन पाउनेछन।
Prevसामान्य मासु पसलेका छोरा बने कोरियाकै सबैभन्दा धनी ब्यक्ति, जानौं को हुन उनि? के ब्यवसाय गर्छन?
Nextकोरियाको संसदमा जब एक महिलाले बच्चा लिएर गइन, तब कानून नै भयो परिवर्तन
जापानले १८ वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई जनही १ लाख येन राहत बाँढ्ने
भोलिबाट कोरियामा नयाँ नि’यम, कमिटेड कामदार १ महिनामै फर्किन पाउने